अष्ट्रेलियामा नयाँ कानुन : आफ्नो इच्छाले मर्न पाइने - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २ पुष २०७४, आईतवार ०४:२५ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा आफ्नै इच्च्छाले मर्न पाइने विधेयक पारित भएको छ । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यको संसदले यस्तो विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयक पारित भएतापनि २०१९ बाट लागु हुने यो कानुन अन्तर्गत जोहोकीले आफैलाई मार्न भने पाउने छैनन्। यो कानुन उपचार नहुने रोग लागेका या असह्य पीडामा भएका बिरामीहरु जसको आयु डाक्टरहरुले ६ महिना वा त्यो भन्दा कम तोकेका छन्, उनीहरुको लागि मात्र लागु हुनेछ । न्यूरोडिजेनेरेटेड रोगबाट ग्रस्त विरामीका लागि भने यो अवधि १ वर्ष तोकिने बताइएको छ।
आफ्नै मृत्युको लागि बिरामीले पहिले आफ्नो चिकित्सक सँग आग्रह गर्नुपर्छ। नीज बिरामीलाई हेरेका चिकित्सकले मृत्युका लागि सिफारीस दिनुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रियामा चिकित्सकले विरामीको रोग र उसको चाहनालाई अनि अवस्थालाई पृष्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। निज बिरामी कम्तिमा पनि १८ वर्ष पुगेको र एक वर्षदेखि सो राज्यमा बसोवास गरेको हुनुपर्नेछ।
बिरामीले इच्छा मृत्युवरण गर्न सक्ने देखिएपछि विरामीको दुई जना आफन्त र एक जना चिकित्सकको साक्षीमा बिरामीको हस्ताक्षर गराइन्छ र यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ। त्यसपछि चिकित्सकले बिरामी व्यक्तिले मृत्युवरण गर्न चाहेको पुष्टि गर्छ ।
त्यसपछि विरामीलाई सहज मृत्युवरण गराइन्छ र परिवारजनलाई मृत्युको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइन्छ।
Previousअष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा रहेको मधेसी समाजको अध्यक्षमा सुरेन्द्र रौनियार
Nextमेलबर्न सप्ताह : हाम्रो प्रयास समानता र एकता, सप्ताहको लागि सम्पूर्णमा निमन्त्रणा
अाज महाअष्टमी पर्व, दुर्गा भवानीको पूजा गरी मनाइँदै
१२ आश्विन २०७४, बिहीबार ०३:०९
डा. गोविन्द केसी ‘भगवान’ होइनन्,उनलाई सजायको भागीदार किन नबनाउने ?
१२ फाल्गुन २०७४, शनिबार ०४:०३
साउथ अष्ट्रेलियामा पीज्जा बारका कामदारले झुट बोलेको पुष्टि, कडा लकडाउन अन्त्य
५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १३:११
२१ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०४:१३